चर्चित अबिबाहित १० सेलिब्रेटी: को सिंगल, को प्याक ? - Saptakoshionline
प्रकाशित मिति: आइतबार, भाद्र १७, २०७५ समय: ११:४५:४२
काठमाडौं – पछिल्लो समय नेपाली फिल्म क्षेत्रमा नयाँ पुस्ताको क्रेज बढि छ । नयाँ पुस्ताको आगमनसँगै पुराना पुस्ताका कलाकारहरु विस्तापित जस्तै भएका छन् । नयाँ कलाकारहरु नै दर्शकका प्रिय बनिरहेका छन् । धेरै सेलिब्रेटीहरु दर्शकको क्रश हुने गर्छन् ।
हामीले देखेका छौं, फिल्म रिलिजका बेला हल पुग्दा नयाँ पुस्ताका कलाकारहरु दर्शकबाट घेरिएका हुन्छन् । अझ युवती फ्यान छिन् भने त आशु नै बगाइदिन्छन् ।
आज हामी ‘फेवा टाइम्स’मा चर्चित १० अबिबाहित सेलिब्रेटीहरुको बारेका चर्चा गर्दैछौं, जो दर्शकको क्रश हुन्,
नेपाली फिल्म क्षेत्रका ‘हट केक’ नायक हुन्, अनमोल केसी । नेपाली फिल्म क्षेत्रमा मेघास्टारको ट्याग दिइन्छ । उनले अभिनय गरेका हरेक फिल्म सफल पनि छन् ।
अनमोल अबिबाहित हुन् । उनी अहिलेसम्म कुनै प्रेममा पनि छैनन् । उनको नाम फिल्म ‘जेरी’ रिलिज ताका नायिका आना शर्मासँग पनि जोडिएको थियो । तर, आना र आफ्नो प्रेमको बारेमा अनमोल मौन थिए । पछिल्लो समय उनीहरुको प्रेम चर्चा पनि चलेको पाइन्दैन् । युवती फ्यानहरुको पहिलो नम्बर रोजाइमा पर्ने अनमोल अहिलेसम्म सिंगल छन् ।
फिल्म ‘प्रेम गीत’बाट चर्चामा आएका नायक हुन् प्रदीप खड्का । प्रेम गीत सफल भएसँगै उनले हजारौ फ्याहरु कमाए । उनका पनि युवती फ्यानहरु बढि छन् । विशेषगरी प्रदिपको मुस्कानको फ्यान धेरै छन् ।
तर, आजसम्म प्रदिप प्रेममा परेको खबर सार्वजनिक भएको छैन । उनलाई प्रेम प्रस्ताव राख्नेको जमात कम छैन् । तर पनि प्रदीप अहिलेसम्म सिंगल लाइफ बिताइरहेका छन् ।
३. पल शाह
नायक पल शाह पनि पछिल्लो समय चर्चामा रहेका नायक हुन् । म्युजिक भिडियो हुदै फिल्म क्षेत्रमा प्रवेश गरेका पलको पनि धेरै फ्यानहरु छन् । दर्शकले उनको पनि मुस्कानलाई रुचाउँछन् ।
अबिबाहित पल आफु सिंगल भएको बताउँछन् । तर, धेरैले उनलाई प्रेममा रहेको तर्क गरिरहेका छन् । उनी र नायिका आँचल शर्मा प्रेममा भएको सबैको बुझई छ । तर, पल र आँचल त्यो कुरालाई स्विकार्न तयार छैनन् ।
४. सलिनमान बनिया
‘ए मेरो हजुर २’ बाट नेपाली रजतपटमा धमकेदार इन्ट्रि मारेका नायक हुन्, सलिनमान वनिया । उनको क्रेज पनि युवतीहरु माझ धेरै छ । उनको चकलेटी लुक्सलाई धेरैले मन पराउँछन् ।
युवती फ्यानहरु वा उनलाई क्रश मान्नेहरुलाई दुःखको कुरा, सलिन सिंगल भने छैनन् । उनी अस्पि्रना जिन्हा श्रेष्ठको प्रेममा छन् । केही महिना अघि नै उनले आफ्नो प्रेमिका सार्वजनिक गरेका थिए ।
५. अनुपविक्रम शाही
‘ह्यान्डसम हंक’को उपमा पाएका नायक हुन्, अनुपविक्रम शाही । अनुप पछिल्लो समयमा फिल्म क्षेत्रमा ‘ह्यान्डसम भिलेन’को रुपमा चिनिन थालेका छन् । अनुपको फ्यानहरुको संख्या पनि कम छैन् ।
अविवाहित नायक अनुपविक्रम पूर्व मिस नेपाल मलिना जोशीसँगको प्रेममा थिए । उनीहरु लामै समय प्रेममा रहे । तर, अहिले अनुप सिंगल छन् । उनको प्रेमको चर्चा भएको छैन । उनी पनि धेरै युवतीहरुको क्रश हुन् ।
नायिका साम्राज्ञी अहिलेको समयमी नम्बर एक नायिका मानिन्छिन् । उनको सुन्दरता र अभिनयको पनि खुबै चर्चा हुने गर्दछ । ड्रिम्सबाट डेब्यु गरेकी उनको पनि धेरै फ्यानहरु छन् ।
अबिबाहित साम्राज्ञी सिंगल भने छैनन् । उनी केही समय अगाडि व्यवसायी मयंक खड्कासँग प्रेममा थिइन् । उनीहरु अहिले छुटिसकेका छन् । तर, साम्राज्ञी अहिले देवांश जंगबहादुर राणाको प्रेममा छिन् ।
२. नम्रता श्रेष्ठ
धेरै युवा फ्यानहरुकी क्रश हुन् नम्रता । उनलाई मन पराउनेको जमात पनि कम छैन् । उनले पनि धरै फ्यानहरु कमाएकी छिन् । उनको सुन्दरता र अभिनयमा फिदा हुनेको संख्या कम छैन् ।
अबिबाहित नम्रता प्रेमी फेर्न भने माहिर छिन् । रेमनदास श्रेष्ठ, प्रेम घलेसँग प्रेममा रहेकी उनी अहिले भने दवा शेर्पासँगको प्रेममा छिन् ।
३. पूजा शर्मा
पूजा शर्मा पनि अबिबाहित सेलिब्रेटी हुन् । उनका पनि धेरै फ्यानहरु छन् । प्रेमगीतबाट चर्चामा आएकी पूजाको अभिनय र उनकरो चुलबुले बानी सबैले रुचाइदिन्छन् ।
धेरै फ्यानहरुको रोजाईमा परेकी पूजा आफैमा भने सिंगल छिन् । उनी आफुलाई सिंगल भएको बताउँदै आएकी छिन् । तर, धेरैले उनको नाम निर्देशक सुदर्शन थापासँग जोड्ने गर्छन् । उनीहरु भने यस कुरामा मौन छन् ।
४. वर्षा राउत
वर्षा राउत पनि पछिल्लो समय चर्चामा रहेकी नायिका हुन् । उनका पनि धेरै फ्यान फलोअर्स छन् । म्युजिक भिडियो हुदै फिल्म क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी उनी पनि धेरै युव फ्यानहरुको क्रश हुन् ।
अबिबाहित वर्षा सिंगल भने हैनन् । उनी नायक तथा व्यवसायी संजोग कोइरालाको प्रेममा छिन् । उनीहरु विगत केही वर्षदेखि प्रेममा छन् । उनीहरु आफ्नो प्रेमलाई खुल्लम खुल्ला स्विकार्छन् ।
५. आंचल शर्मा
‘नाई नभन्नु ल ४’ बाट रजतपटमा डेब्यु मारेकी आंचलको धेरै फ्याहरु छन् । पछिल्लो समय रुचाइएकी नायिकामा पर्छिन् उनी । उनले पनि हजारौ फ्यान कमाइसेकी छिन् ।
धेरै युवाहरुको ढुकढुकी बनेकी आंचल आफुलाई सिंगल बताउँदै आएकी छिन् । तर, आंचलको नाम नायक पल शाहसँग जोडिने गर्छ । उनीहरुको जोडीलाई पनि दर्शकले खुबै मन पराउँछन् । उनीहरुको जोडीलाई आँप जोडीको उपनाम समेत दिइएको छ ।